Posted by မြရွက်ဝေ at 4:37 PM
မခင်ဦးမေ---> ငံပြာရည်ချက် လုပ်မလို့ စဉ်းစားပေမယ့် ငံလွန်းလို့ မစားနိုင်လို့ ခုလိုလုပ်လိုက်တာ။ ငံပြာရည်ဖျော်လို့ ပြောလဲ ရမလားသိဘူး။
မလင်း---> မစားရတာထက် စာရင် ကြံဖန်ပြီး စားလိုက်ရမှ အာသာပြေသွားတာ အမှန်။ :)
ချစ်လို့စတာ စိတ်မဆိုးနဲ့ သိတ်သဘောကျလို့ပါ
မခင်ဦးမေ---> စိတ်မဆိုးပါဘူး အမရေ။ တို့ချစ်အမကို ချစ်ပြီးသား။ အမဆီက ချစ်မွှေးလာနှုတ်ဖို့ စိတ်ကူးနေတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အာသာပြေသွားတာပါဘဲ။ :)
ready made ထုတ်ဆိုရင်ကော။ မကျိုနဲ့ လေ။ရေနွေးပွက်၂လောင်းထည့်လိုက်။ ကျိုစားတာလောက်တော့မကောင်းပေမဲ့
တို့စရာ ပန်းကန် နဲ့ ငါးပိရည်က စားချင်စရာ.. တို့စရာ ပန်းကန်ကြီး ပိုကြိုက်တယ်.. အသီးအရွက် အစုံနဲ့ :)
အမက ညီမလေး ငြိမ်နေတယ်၊ နေမှ ကောင်းရဲ့လား ဆိုပြီး တွေးနေတာ.. ယောင်းယောင်းရောက်နေလို့ကိုး.. :)
ညီမတို့ဆီမှာ ယိုးဒယားဆိုင် မရှိဘူး ထင်တယ်။ သူတို့ဆိုင်တွေမှာတော့ ရေချိုငါးပိ သိပ်ပြီးသား ၀ယ်လို့ ရတယ်။ အရမ်းမငံဘူး။ သန့်တယ်။ ပြန်ကျိုဖို့တော့ လိုတာပေါ့။ အဲ အနံ့ကတော့ ရှိဆဲပဲ။ ဒါကလည်း ငါးပိရည်ရဲ့ ၀ိသေသပဲ မဟုတ်လား။
ထပ်လာကြည့်ဲက အကြံ့ပူချက်များ ကို သုံးသပ် ကာ ကျေနပ်သွား၏။ နောင် ငပိရည်ကလေး မြင်ချင်တယ်.။ သနားလို့။ ယိုးဒယာဆိုင်သွားပါ။ ရန်ကုန်က ready made ရှာပါ။ တို့ စလုံးမှာ နေပါသည်။ ဒန်တန်ှုတန်. အများကြီး.. အများကြီး
ပုံတွေ ကို ပြန်ကြည့်ကာ ကျေနပ်နေသည်။ ကိုယ်ကုတိုင် စားရသကဲ့သိူ့
ယိုးဒယားဆိုင်မှာ ငါးပိစိမ်းစားက အစရှိပါတယ်။
တိုကျိုမှာနေပီးများ ညီိမရယ် အစုံရှိတယ်။
ငန်ပြာရည်ရော ငါပိ ငါးပိရည် သဘောင်္သီးတွေ အစုံရှိပါတယ်ကွာ..။ မျှစ်ချဉ်တောင် ရှိသေးတယ်။ သေချာမေးကြည့်ပါလား တယောက်ယောက်ကို။ သဘောင်္သီးအစိမ်းလဲ တခါတလေ ၂၅၀ နဲ့ရပါတယ်။
ယိုးဒယားဆိုင်မှာ သွားမွှေ ။ ဈေးပေါတဲ့ဆိုင်လဲရှိတယ်။ ချဉ်ပေါင်ရွက်ချိန်ဆိုလဲ ရှိတာပဲ။ ဗူးသီးတွေလဲ ရှိတာပဲ။ ၀က်တောင် အကုန်အစုံရှိတယ်။ ကြက်ခေါင်းခြေထောက်ကအစရှိတယ်။ ညီမနေတာ တိုကျိုမှာပါ. သေချာမေးလိုက်နော်။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မရှိတာထက် စာရင်စားကောင်းတာပဲ။ ငါးပိရည်တောင် စားချင်လာပြီ။
Actually u can buy it in the on line shop called Paknamstore.shop-pro.jp. Actually , I found that shop in ur Jp online shopping2. LOL. Thanks for sharing ne.
here is the link that will help u find it easily.
There u can buy different kind of Ngapi.
JuneOne---> ကျေးဇူးပါ အမရေ။
စုဘူးအိမ်---> ready made ရဲ့ အရသာက ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်နဲ့မို့ သိပ်မကြိုက်တာနဲ့ မမှာဖြစ်တာပါ။
မနု-စံ---> အမလာလည်ရင်လည်း တို့စရာတွေ အများကြီး လုပ်ပေးမယ်နော။
မနုသွဲ့---> ယိုးဒယား စားသောက်ကုန် ရောင်းတဲ့ဆိုင်က အိမ်အနီးအနားမှာ မရှိတာပါ။ စားသောက်ဆိုင်တွေတော့ ရှိတယ်။
မခင်ဦးမေ---> အမတို့ဆီမှာ မြန်မာက အစားအစာ အကုန်ရတာ အားကျတယ်။ မနာတလိုတောင် ဖြစ်ချင်လာဘီနော်။ :D
မမြတ်နိုး---> "အုအဲနို"ဘက် သွားရှာရင်တော့ ရနိုင်မှာပါ။ နှစ်ရက် တခါလောက် ဈေးဝယ်ထွက်ဖြစ်တော့ နီးနီးနားနားဘဲ သွားချင်တာကြောင့်ပါ။ "အုအဲနို"က လူအရမ်းရှုပ်လို့ တိုးဝှေ့ဝယ်ရတာ မကြိုက်တာ။
မပုံရိပ်---> ဟုတ်တယ် အမရေ၊ အရင်ကတော့ မချက်တတ်/လုပ်တတ်လို့ ငတ်၊ ခုတော့ တဖြည်းဖြည်း ကြံဖန်တတ်လာပြီ။
baby---> ကျမမှာ Paknamstore အပြင် တခြား ယိုးဒယားဆိုင်တွေရဲ့ ဆိုက်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ လိုချင်တာ အလွယ်နဲ့ အမြန် ဝယ်မရတာ ပြောတာပါ။
အဟီး.... သရေတောင်ကျလာပြီ။ အရင်ကငါးပိရေ ကိုအရမ်းမကြိုက်ပါဘူး။ အခု ကြည့်ပြီး စားချင်လာတာနဲ့စားသွားတယ်။ အဟီး Dinner အတွက်ပါဆယ်ပါဆွဲသွားတယ်နော်။
စားချင်လိုက်တာ ....တို့ စရာလေးတွေနဲ့ဆိုလို့ကတော့ ...အနည်းဆုံး ၃ ပန်ကံ ပဲ . ....
စိတ် ပိန် ကုန် ပျက်
နောက်တစ်ခါ ကြုံရင် ငါးပိရည်ကျို အခဲလုပ်ပြီး ယူခဲ့ပေးမယ်နော်။
ငါးပိရည်ကျိုကို ပျစ်နေအောင်ကျို၊ ခမ်းအောင်တည်၊ ပြီးမှ ငါးပိစိမ်းစားလို အနှစ်လုပ်၊ စားခါနီးကျရင် ရေနွေးပူပူနဲ့ ဖျော်စားရုံပဲ။ အဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးမယ်
ဥအဲနိုဆိုင်မှာ ယန်း၅၀၀ တဲ့..
ညီမလေးကို အစ်မပြဖြစ်သေးလားသိဘူး။း)
yar---> ကျမလည်း ငယ်ငယ်က ငပိရည် မကြိုက်ဘူး။ ကြီးမှ ကြိုက်သွားတာ။
chenaddy---> ယိုးဒယားမှာ ပဲပြုတ်မရှိဘူးလား???
မလုလု---> ဟယ် တကူးတက လုပ်မလာပါနဲ့ အမရယ်။ အလုပ်ရှုပ်ပါတယ် အားနာတယ်။ နောက်တခါဆို အိမ်လိုက်လည်ရမယ်နော။
မဝါဝါ---> ပြပေးတယ်လေ အမရေ။ ညီမ အွန်လိုင်းက ဈေးဝယ်တုန်းမှာ အဲလို ပုလင်းလည်းတွေ့တယ်။ ငါးပိမှန်းမသိတာ။ အညွှန်းကိုဖတ်ကြည့်ပြီး ငါးအနှစ်လို့ဘဲ ထင်လိုက်တာ။ ကျေးဇူးနော် အမရေ။ နောက်တခါကျ ဝယ်ရမယ်။